Umsindo ngohlelo lokwakhiwa kwemizi yaMakhosi - Bayede News
by nguCebo Buthelezi
UButhelezi uyintatheli yezindaba zomphakathi.
Bamchome olwegwalagwala uphromotha uMagudulela
EMUVA kwesikhathi eside uMnyango Wezokubusa Nokubambisana Nezindaba ZoMdabu KwaZulu-Natal wasungula uhlelo lokwakha imizi yaMakhosi, iqembu iDemocratic Alliance (DA) esifundazweni lisihlabe lasihlikiza isiphakamiso soMnyango sokwenza lokhu ngemali eyizigidi ezili-R15.
Le mizi yezizwe okukhulunywa ngayo yilapho aMakhosi ehlangana khona nezizwe zawo kubanjwe imihlangano nokuyilapho okudingidwa khona izindaba zokuthuthukiswa kwemiphakathi yilabo abahweba ngamabhizinisi emihlabeni yamaKhosi nokunye okuningi.
IDemocratic Alliance ithi lolu lwazi luyingxenye yempendulo yeSishayamthetho eqhamuke emibuzweni ephakanyiswe yiyo ngalolu daba. Lokhu kulandela isiphakamiso soMphathiswa woMnyango uNkk uNomusa uMaDube Ncube ngasekuqaleni konyaka, sokuthi imali eyizi-R580 million yokuhambisa ingqalasizinda emphakathini ngokwezinhlelo zomasipala izobe ibanjwa iminyaka emithathu ezayo ukuze kuqokelelwe imali yemihlomulo yezinduna zaMakhosi okuwuhlelo olwasungulwa nguMengameli uZuma.
Umholi weDA eSishayamthetho saKwaZulu-Natal uMnu uFrancois Rodgers uthe, “Lesi sifundazwe sisenkingeni enkulu yokushoda ngemali nalapho sidinga imali eyizigidi ezingama-R53 emisebenzini yokuthuthukiswa komnotho wendawo. Okunye ukuthi imali iyadingeka uma kunezinhlekelele nokusiza njengoba kubuye kube nesomiso. Imali edingekayo ilinganiselwa ezigidini ezili-R145 kanti imiklamo yezolimo yona idinga ezingama-R20.
Uqhube ngokuthi ukwehluleka kwesabelo sezimali sikazwelonke esiyizigidigidi ezingama-R50 ngonyaka wezimali wezi-2018/19 ukugcina izidingo zomphakathi kungenza iKwaZulu-Natal ibone isabelomali sayo sincishiswa ngezigidigidi ezingama-R8 okuzolimaza kakhulu uhlelo lokuhlinzeka abaphofu ngezidingongqangi.” UFrancois uphinde wakhomba ngenjumbane Ingonyama Trust wathi iphethe umhlaba omningi futhi iyakwazi ukuzikhandela inzuzo eyanele, kungani ingahlinzeki aMakhosi ezizwe ngokuwakhela imizi ngoba ngeke yehluleke ukwenza lokho.
Ngesikhathi elaboHlanga lulandela lolu daba luthinta okhulumela iDA eSishayamthetho saKwaZulu-Natal uNks uLauren Silen uphendule ngokuthi, “Ukuze sikwazi ukuphendula kahle sicela wazi ukuthi kuzodingeka sithumele umbuzo wokulandelela kuMphathiswa bese siyaphendula. Impendulo ingase ingafiki kulo nyaka kodwa sizogcina siphenduliwe,” kusho uSilen.
Okhulumela uMnyango Wezokubusa Nokubambisana Nezindaba ZoMdabu KwaZulu-Natal uMnu uLennox Mabaso ube esethumela isitatimende soMnyango ukuphendula uFrancois weDA mayelana nezakhiwo zobuholi bendabuko kanye nokwesekelwa okuvela kuHulumeni wesifundazwe. UMabaso uthe, “Lolu hlelo okukhulunywa ngalo lwamukelwe yiSishayamthetho sesifundazwe futhi luhlose ukubuyisela isithunzi samaziko endabuko ngokuhlinzeka ingqalasizinda lapho abaholi bendabuko bengamukela izivakashi emihlanganweni futhi banikeze nendawo yokuhlala. Ngokuphambene nalokho okushiwo iDA, lezi zakhiwo akuzona ezokusetshenziswa komuntu ngamunye.
Umholi wendabuko ngamunye esifundazweni unekhaya lakhe. Basebenza ezindaweni eziningana ezikhundleni zabo ezisemthethweni. Kuyinto eyaziwa kakhulu ukuthi imiphakathi yendabuko ihlala emabhizinisini amakhulu, njengezimayini, ukudayisa, ukukhiqiza, ezolimo njalonjalo, futhi nazo zamukela imihlangano yazo kanye nokubandakanya kulezi zakhiwo.
Uqhube ngokuthi iDA izama ngamabomu ukuguqula amaqiniso ahambisana nalolu hlelo ngenhloso engathandabuzeki yokuzidonsela amehlo ngokwakha isihloko esinohlonze. NjengoMnyango, ayisimangazi inzondo yeDA ngezikhungo zendabuko iyaziwa kahle futhi ibhalwe kahle. Ukuhlaselwa kweSILO, aMakhosi kanye nezinye izakhiwo zendabuko kukhishwa kuleli qembu lezombangazwe ngendlela evusa uhlevane kanye nokwanda kodlame.
Noma yikuphi uHulumeni akwenzayo esikhungweni sethu sobuholi bendabuko kuphonselwa inselelo yiDA ngendlela yokuchitha imali. Uma iDA ingaba nendlela yayo, aMakhosi azobhekana nengwadla yokunganakwa okungaphezu kwalokho akutholile ezandleni zikaHulumeni wobandlululo,” kusho uMabaso. Uqhube wathi uHulumeni okhethwe ngentando yeningi uyavuma futhi uyayazisa indima yezakhiwo zendabuko ekuthuthukiseni umphakathi kanye nokulethwa kwezidingo. Uthe aMakhosi angabalingani ababalulekile ekubuseni nokubambisana futhi kufanele ahlonishwe.
Uphinde wakuhlaba wakuhlikiza uMabaso lokhu okwenziwa yiDA wathi, “Kuyinto eyaziwayo ukuthi bonke abamele iDA bayadingeka ukuba bahlabe umkhosi wabo wokucula amanga.”
nguCebo Buthelezi Nov 16, 2017